Ahoana ny fampiasana ny fizahana manokana amin'ny Safari amin'ny IOS 7 | Vaovao IPhone
Ahoana ny fampiasana fizahana manokana amin'ny Safari amin'ny IOS 7
La fitadiavana manokana dia safidy azo jerena ao amin'ny Safari, izay ahafahantsika mivezivezy tsy mamela tahirin-kevitra ao amin'ny fitaovantsika, toy ny fisie vetivety, cookies, tantara fitetezana, ankoatra ny zavatra hafa.
Ity karazana fitetezana ity dia malaza be amin'ny antony maro samihafa ary mora ampiasaina ankehitriny amin'ny iPad, iPhone ary iPod Touch satria vitantsika izany. mivantana avy amin'ny navigateur Safari, raha tsy very ireo takelaka nosokafanay tao amin'ny tranokalanay. Ity safidy ity dia manampy fanatsarana ireo izay efa nataontsika teo amin'ny andiany teo aloha an'ny iOS 7.
Ao amin'ny kinova iOS taloha, tsy maintsy nampiasa fampiharana fahatelo izahay afaka mizaha manokana, toy ny Google Chrome. Roa herinandro lasa izay dia naseho an'izany fitetezana manokana amin'ny chrome fa tsy mitokana araka ny voalaza ao, satria mamonjy ny tantaran'ireo pejy notsidihina. Mampiasà fizahana manokana ao Safari miaraka amin'ny IOS 7 Tsy dia mora loatra izany, ary ny fampiasana azy dia mitovy tanteraka na amin'ny iPad, iPhone na iPod Touch.
Sokafy ny «Safari»
Hiseho ireo pejin-tranonkala izay nosokafanay tamin'ny tranokala fitetezana.
Tsindrio ny marika + hita ao amin'ny zoro havanana havanana.
Raha manana adiresy voatahiry ao anaty ankafizintsika isika, dia hiseho eo amin'ny farany ambany amin'ny fitetezana azy ireo.
Manome izahay avy eo Nav. manokana, miorina amin'ny zoro ambany havia.
Hisy hafatra iray hampahafantatra antsika raha te-hanidy ny takelaka amin'ireo pejy web nosokafana teo aloha isika alohan'ny hampiasana ny fizahana manokana.
Avy eo dia mifidy ny safidy tena tadiavintsika indrindra isika. Raha te-hanidy azy ireo isika dia hanao izany i Safari. Raha tsy izany dia hiova ho mainty ny lokon'ny browser ary hanomboka hitety samirery izahay.
Raha hivoaka ny fizahana manokana, ny sisa ataontsika dia tsindrio ny safidy ho an'ity tanjona ity, izany hoe, momba ny Nav. manokana, avy eo ho lasa fotsy indray ilay mpitety tranonkala, fa tsy mainty, izay milaza fa mizaha miafina izahay.
Fanazavana fanampiny - Ny fomba incognito ao amin'ny Chrome ho an'ny iOS dia tsy "incognito" loatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ahoana ny fampiasana fizahana manokana amin'ny Safari amin'ny IOS 7
Ataovy ao an-tsaina fa raha mampiasa browsing manokana ianao dia tsy azo ampifanarahana amin'ny alàlan'ny icloud ireo takelaka.
Tonga sinoa aho mandra-pahatsapako ny antony tsy mampifanindrahindrana fitaovana roa. Mazava ho an'ny sasany, kely kokoa ho an'ny sasany.
Ary inona no hatao amin'ireo ankizy sy amin'ny Internet? Manahy aho hoe ahoana no ahafantarako izay jeren'izy ireo?
Valio i Marta
Mba hahafantarana hoe aiza no misy azy ireo dia manana ny tantara ianao. Saingy ao amin'ny Settings-General-Restrictions-Web dia azonao atao ny mametra ny atiny.
Ny tiana holazaina dia hoe amin'ny fitsidihana manokana dia tsy mamela soritry ny tantara ianao. Izay ilay resahina, sa tsy izany?
Azonao atao ny miditra amin'ny famerana fitetezana ao anatin'ny fikirana. Amboary araka izay avelanao ho hitan'ny zanakao.
Ny hafatra mivoaka rehefa manokatra fitetezana manokana aho mba hitazonana ny takelaka hanokatra na hanidy, amin'ny findaiko dia tsy mivoaka izany, miditra mivantana amin'ny fizahana manokana aho rehefa manindry ny bokotra. Fa nahoana izany? Azoko ihany koa ireo pejy nojerena indrindra amin'ireo sary masina, tsy tokony tsy hitahiry tantara ve izany? Fa maninona no misy pejy mivoaka eo? MISAOTRA
Io hafatra io dia toa nanjavona tamin'ny kinova farany, farafaharatsiny tsy toa ahy koa izany. Ny iray hafa, ireo dia ireo pejin'ny fizahana mahazatra, fa tsy mitokana.
Oh, okay. Ary tsy misy fomba hahafantarana raha ampiasaina amin'ny safari iPhone ny fizahana manokana?
Indrisy fa tsia. Ny safidy tsara indrindra dia ny manakana ny fidirana amin'ny atiny izay tsy tianao hidirana amin'ny alàlan'ny fameperana.
Mahazoa iPhone 5s miaraka amin'ny boaty Actualidad iPhone sy Concept